Play Xbox One Imidlalo On Windows 10	About Us
Ukuhumusha Hlela Translationby Popular Posts Dirt Rally Full Game ukubuyekeza	Iminyaka eminingi idlala ngokusebenzisa Codemasters’ popular Dirt series, Ngangicabanga yayiphathelene ukuqonda indlela ubuhlanga rally c ... Poly Bridge Download Full Game (Cracked)	We present to you the new and updated Poly Bridge Full Steam game.... Black Desert CD Key Generator [Keygen]	We present to you the new and updated Black Desert Key Generator.... FIFA 16 Official Video Trailer	This is the official video trailer for FIFA 16 video game..
Anyone else catch that on 1:13 ? Costa and Henderson chest ... Thwebula Windows 10 for FREE	Yathela bonke izivakashi indawo Thola-cracked..Today sethula ukufakwa test of Amawindi 10... The Witcher 2 Assassins of Kings CD Key Generator	Thwebula yakamuva The Witcher 2 Assassins of Kings umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho .... Ukubizelwa Umsebenzi: Ama-Black Ops 3 Abaqoqi Edition badayise	The Collector sika Edition for Call of Duty: Ama-Black Ops 3 uye ishukunyiswa ... Stranded Deep Steam Code Generator	We present to you the new and updated Stranded Deep Steam Code Generator.... Zynga Poker likaHack yilelo elaligqokwe Chips	Wena lost wonke Chips zakho noma Gold on Zynga Poker? Noma othile weba it? Tired of ukukhokha imali chips negolide on Facebook ... Garbage Day CD Key Generator 2016	We present to you the new and updated Garbage Day CD Key Generator.... Ibanga CD Key Generator 2016	Download latest Distance cd key generator and generate your own free activation cd key.... Escape from Tarkov CD Key Generator	We present to you the new and updated Escape from Tarkov CD Key Generator.... Gears of War: Ithuluzi Ultimate Edition Keygen 2015	Download Gears of War: Ultimate Edition cd generator key ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho .... Soma khulula Product Code Generator 2015	Thwebula soma cd generator key ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho .... Next Battlefield Game Is Coming	Electronic Arts is currently prepping for the next Battlefield game although Celebrity Wars: Battlefront hasn’t launched... Free Google Play Code Generator 2014	Ingabe ufuna ukuthenga into awusoze wakwazi ukukhokhela?Well check out this Google Play Gift Card Codes Generator that was l... Ben and Ed Khulula CD Key Generator 2016	Download latest Ben and Ed free cd key generator and generate your own free activation cd key.... FIFA 16 CD Key Hack Generator Ithuluzi	Thwebula FIFA 16 cd key Hack generator ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho .... American Truck Simulator Keygen (CD Keys)	ProKeygens hack team proudly present to you the new and updated American Truck Simulator Keygen Tool.... Euro Truck Simulator 2 Thwebula Game Full	Thwebula Khulula Euro Truck Simulator 2 pc full, xbox futhi PlayStation aqhephukile umdlalo .... Play Xbox One Imidlalo On Windows 10
Posted in Game News, Izindaba	2015-07-20
Kulabo kini laphaya abangenawo Xbox One and Windows 10 uzokwazi ozothutha futhi ukudlala isiqophi imidlalo phakathi kumadivaysi womabili … namuhla. Isitatimende waphuma, ukuhlinzeka gamers the ngqo ukuthi yabo multi-platform isiqophi yokudlala Ukumisa nje got upgrade.PC World wenza bhala-up on kanjani uxhumano singenziwa phakathi kokubili ezisekelweni, njengoba Microsoft uye empeleni wakwazi ekuvaleni PC isiqophi yokudlala yesikhulumi yesikhulumi ekhaya console.
Ukuze gamers possess an i-Xbox One nke kumele ukwenze ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa OS okufushane 7.7.16004.00000 lapho une ukwakha yamuva iningi Windows 10. Uma wamisa uhlelo lokusebenza Xbox uzokwazi ukuba synch zombili izinhlelo nomfudlana isiqophi imidlalo kusuka umtapo wakho Xbox yakho Amawindi 10 PC.
Ngokwemvelo, ividiyo imidlalo emtapweni wakho kufanele ukufakwa Xbox One for yonke into ukusebenza. Uzoba futhi kufanele uvumele izinqumo uxhumano on kokubili izinhlelo. Ngokuba PC ungasebenzisa imenyu kwesokunxele emaceleni ukupheqela phansi isixhumanisi imenyu bese ngesandla ufaka ikheli le-IP Xbox One yakho ibe isikrini uxhumano. Uzothola ikheli le-IP Xbox yakho One in the izinqumo network ngaphakathi imenyu amasethingi.
Ngaphezu kwalokho, ngoba Xbox One ungakwazi sikwazi Ukusakaza by ulibangise izilungiselelo, uya okuthandwa ke okwenza kube nokwenzeka choice bathuthelekela kwezinye zobuchwepheshe. , uma uya inethiwekhi yakho isikhungo on PC kumele ubone Xbox One in the isethaphu.
Lokho tweaking, ukudlala nenombolo crunching, uzokwazi ukuqala zigeleza Xbox One yakho imidlalo PC. Simane qalisa uhlelo lokusebenza Xbox kwi Windows yakho 10 idivayisi futhi emva ukuthi vakashela umtapo wezincwadi bese ukhetha 'Play’ on the game video ofuna usakaze.
PC World uphawula ukuthi Microsoft izobandakanya support for isiko imidlalo Windows 10 ukusetshenziswa lokusebenza Xbox. Nathi ukwazi ukuthi uhlelo lokusebenza ngokuqinisekile ukusebenza kanye khono Xbox One akwazi ukudlala emuva ofanele isiqophi imidlalo kusukela umtapo Xbox 360 sika.
Lokhu kungafaka bheka ngempela okuyenga for abanye abadlali PC ayefisa ukungena esithile video game with Xbox 360 isiqophi imidlalo uya for egqame kakhudlwana and ngokushesha Uhlaka-rates. Ukuhambisana emuva ngeke lwendabuko Xbox One abasebenzisi kuze kube yilolu kuwa. Okwamanje, badlali nje akwazi ukudlala-test ezinye umtapo Xbox 360 kule ukwakha kusengaphambili OS for lwesishiyagalombili-gen console Microsoft.
Ukuze abadlali PC hardcore akukhona ngempela kuzoba okuningi kulesi sici ukuthi olinga ukuba bathole i-Xbox One, ngaphandle kukhona Esimweni lapho endlini yokuphumula ITHELEVISHINI wenziwa matasa kanye nani ngempela abafisa ukudlala ezinye exclusives console.
Ngiyacabanga Ukusakaza phakathi PC kanye Xbox One isiqophi imidlalo ngokuqinisekile ukuyenga abantu abafisa ukudlala isiqophi imidlalo lapho kunzima egijimela Spec on Xbox One, like Dead Rising 3 noma imidlalo efana Project CARS. Esimweni izihloko Multiplatform kwakungeke kakhulu cishe kuyokwenza umqondo more ukuze uthole inguqulo PC.
Kungenjalo, uzothola ukudlala Xbox One imidlalo esebenzisa-Xbox Live nabanye abadlali online. Awukwazi ukusebenzisa ikhibhodi mouse futhi kuyomelwe ukuba anamathele ne-Xbox 360 noma Xbox One amabhanoyi ukuze usakaze isiqophi imidlalo.
Tags: imidlalo, windows 10, xbox one	Related Posts: